Sidee looga hortagayaa shaashadda ku taal Android inuu si otomaatik ah u damin | Androidsis
Waxyaabaha hubaal ah in inta badan dadka isticmaala Android ay ku dhacday iyaga munaasabad waa iyaga oo isticmaalaya taleefanka, laakiin daqiiqado yar ka dib iyaga oo aan waxba qaban shaashadda ayaa si otomaatig ah u damisa. Marka haddii aad rabto inaad mar labaad isticmaasho, waa inaad mar labaad gelisaa qaabka ama lambarka sirta ah. Tani waa wax xaalado badan ka careysiin kara.
Laakiin runtu waxay tahay in Android waxaan haysanaa suurtagalnimada hagaaji inta aan dooneyno shaashadda si aan u sii joogno. Nidaamka qalliinka wuxuu noo siinayaa suurtagalnimadaan qaab aad u fudud. Marka waxaa laga yaabaa inay xiiso noo leedahay inaan wax ka beddelno qalabka.
Caadi ahaan, shaashad si otomaatig ah ayaa dhaqso u demisa hab lagu keydiyo tamarta. Waxaan horeyba u ognahay in shaashadda ay tahay tan ugu tamarta badan taleefanka Android. Wax ay adeegsadayaashu raadsadaan inay kula dagaallamaan xeelado badan, sida adeegsiga qaar ka mid ah waraaqaha waraaqaha. Sidaa darteed, dejinta waqtiga shaashadu sii joogi doonto waa wax ka caawin kara arrintan sidoo kale.
Sida loola qabsado dhalaalka shaashadda iyo heerkulka Android
Laakiin maxaa waa inaysan dhicin waa in shaqadani ay saameyn ku leedahay isticmaalka iyo khibrada isticmaalka taleefanka Android. Maaddaama uusan qofna dooneynin in shaashadda la deminayo mar kasta, ka dibna ay tahay inuu dib u soo galo qaabka ama lambarka taleefanka. Sidaa darteed, waan hagaajin karnaa waqtiga aan dooneyno inaan dhaafno illaa shaashadda ay ka dansan tahay. Tani waxay suurtogal ku tahay taleefanka gacanta laftiisa, sidaa darteed maahan wax dhib badan.
Isku hagaaji inta uu shaashadda ku sii jiro Android
Dareenkaan, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah fur dejinta qalabka casriga ah ee Android. Dhexdooda waxaan ku haynaa qaybo taxane ah. Waxa caadiga ah waa inaan haysanno mid shaashadda ah, oo ah midka ay tahay inaan galno. In kasta oo ay taasi kuxirantahay lakab kasta oo qaabeynta ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad gashaa qaybta ay ku yaalliin goobaha tilmaamaya shaashadda taleefanka.
Goobahan gudahood waxaa ku jira qayb ka mid ah go'aan ka gaadho inta ay qaadanayso illaa shaashadda deminayso. Waxay kuxirantahay nooca Android ee aad haysato, magaca wuu ku kala duwanaan karaa. Qaababka qaarkood waxaa loogu yeeraa Nasasho, kuwa kalena waqtiga Hakinta, halka kuwa kale adeegsadaan magacyo sida Hakinta ka dib… Laakiin kiisaska oo dhan way iska cadahay inay tahay qaybta annaga noo danaynaysa kiiskan.
Adoo gujinaya qaybtan, xulashooyin taxane ah waa inay soo muuqdaan. Kani waa waqtiga aan dooran karno inaan shaashadda taleefanka ku sii jirno. Taas macnaheedu waxa weeye in wakhti cayiman kadib dhaqdhaqaaq la'aan, shaashadda ayaa demin doonta. Waqtiyada udhaxeeya ee la soo bandhigay way ku kala duwanaan karaan telefoon ilaa taleefan. Muhiimaddu waa in la doorto mid ku habboon waxa aan raadineyno, oo aan dooneyno in aan dhaqso u demin. Markaa dooro xulashooyinka sida 2 daqiiqo, tusaale ahaan. Kaas oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho shaashadda ku jirta Android dhibaato la’aan.
Dhibaatooyinka gidaarka ee caadiga ah iyo sida loogu hagaajiyo Android
Markaad dooratid muddadan, waa inaad ka tagtaa qaybtan. Isbedelka la sameeyay ayaa horay loogu dalbaday taleefanka. Marka hadda, markaan isticmaaleyno Android, shaashadda ayaa qaadan doonta labadaas daqiiqo in la damiyo marka aanan isticmaaleynin. Waxay noqon kartaa mid waxtar badan leh haddii aan wax ka aqrinayno shaashadda taleefanka. Maaddaama ay u oggolaanayso adeegsi aad u wanaagsan. Mar kasta oo aad rabto inaad bedesho markan, talaabooyinka la raacayo waa isku mid xaalad kasta, sidaa darteed waa mid aad u fudud.
Waa in maskaxda lagu hayaa in shaashadda ku jirta Android ay daaran tahay waqti dheer waxay ka dhigan tahay adeegsiga korantada oo sarreeya taleefanka. Markaa maahan inaad doorato xulashooyinka waqtiga ugu dheer, maxaa yeelay ugu dambeyn isticmaalka wuxuu noqon karaa mid aad u badan, iyadoon loo baahneyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga hortago in shaashadda taleefanka gacanta ee Android aad si otomaatig ah u damiso